Benza njani abathengisi beSebenzisa iMidiya yokuSebenza?
Ukuba uyazibuza ukuba abathengisi bayisebenzisa njani imithombo yeendaba kumashishini abo, Hubspot batsale kunye umfanekiso ocacileyo wokubonisa ezinye zeziphumo ezivela kubaphenduli abayi-6,491 bophando olwenziwe nguMoz. Idatha yakhutshwa kwifayile ye- ngokudibeneyo webinar phakathi Hubspot kunye neMoz namhlanje. Omnye umthetho onomdla, i-44.4% yabaphenduli bophando bathi inqanaba labo lobuchule kwimidiya yoluntu laliku phambili or ingcali inqanaba!
I-infographic evela: Isoftware yeNtengiso yeHubSpot. Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Singamalungu e-HubSpot.
tags: amajelo asekuhlaleni ahambele phambilihubspotseomozingcali kwimidiya yoluntuuphando kwimidiya yoluntu